Google ozugbo bụ ụzọ ọhụrụ maka nkwenye nzọụkwụ 2 | Gam akporosis
Onye ọ bụla nwere akaụntụ Google nwere ozi nkeonwe zuru ezu na nlezianya na-echebe. Ya mere, sistemụ nke na-eme ka nchedo karịa nwee ike ịba uru oge niile, ewepụ n'eziokwu na anyị nwere weebụsaịtị anyị iji chịkwaa, chebe ma debe akaụntụ ahụ kpọmkwem ọ tụgharịrị otu afọ gara aga n’oge na-adịbeghị anya.
Google taa mara ọkwa a usoro nkwenye uzo ozo ohuru nke ị kpọrọ "Google prompt". Na nke a, ị pụrụ nanị unlock kpọghee ekwt gị ama iji nyochaa njirimara gị mgbe ị na-abanye n'ime gị Google akaụntụ. Google kwupụtara atụmatụ maka ndị ọrụ Google ngwa taa, mana ọbụlagodi akụkọ onwe onye nwere ike gbanye ya.
Iji mee ka usoro ọhụrụ a rụọ ọrụ a na-akpọ Google ozugbo, anyị na-aga na ibe akaụntụ m na google mgbe ahụ họrọ "Banye & nche"Chọọ site na ịpịgharị gaa na "ntinye Google" wee họrọ "Nyocha Nzọụkwụ abụọ" na kaadị "Paswọdu na Usoro Nbanye".
Nwere ike mgbe ahụ họrọ ịgbakwunye a ekwentị maka Google ozugbo ngwá ọrụ. A achọrọ njikọ data Iji jiri Google ozugbo na ndị ọrụ gam akporo ga-achọ mmelite Google Play kachasị ọhụrụ iji jiri atụmatụ ahụ. Ndị ọrụ IOS ga-achọ ịnweta ngwa Google Search na ngwaọrụ ha.
Oge ị mere ya, ị ga-enweta amamọkwa na ekwentị gị mgbe ị na-agbalị ịbanye n'ime akaụntụ Google gị. Mgbe mkpu pụtara, ị nwere ike kpọghee ekwentị gị wee pịa "Ee" ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-abanye ma ọ bụ "Mba" ọ bụrụ na ọ bụghị gị na-anwale.
Nke a abụghị naanị njirimara nkwenye abụọ nke Google, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ na-enyekwa ederede na ozi olu iji nyochaa nbanye gị, yana enwere ngwa a raara nye ya, Google Authenticator. Naanị ihe Google chọrọ bụ ihe kacha usoro ka e meere akaụntụ gị, n'ihi na ị na-enweta ozi ozugbo kama ichere maka ozi ederede ma ọ bụ olu.
Mmelite ahụ ga-abịa site na Ọrụ Google Play ụbọchị 3 na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Google ngwa ngwa bụ usoro ọhụụ ọhụụ abụọ maka gam akporo na iOS